Madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh oo loo dhaariyay Xubinimada Baarlamaanka – STAR FM SOMALIA
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhow loo dhaariyay Xildhibaanada Baarlamaanka Golaha shacabka, si waafaqsan dastuurka dalka qodobka 64aad.
Kulanka Baarlamaanka ayaa lagu dhaariyay Mudane Xasan Sheekh, iyadoo Xildhibaanada ay si sharaf leh ay ugu sacbiyeen markii loo dhaariyay.
Madaxweynihii hore Xasan Sheekh ayaa noqonay Xildhibaan illaa inta uu nool yahay, waxaa uu noqonayaa Xildhibaanka 276aad.
Sida ku cad dastuurka qodobkiisa 64aad farqadiisa 4aad (page 19) oo ogolaanaya in “qof kasta oo noqda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, marka uu xilka banneeyo, wuxuu noqonayaa xildhibaan Golaha Shacabka inta uu nool yahay haddii aan xil-ka- qaadis lagu samayn iyadoo aanay muddadii xil-hayntiisu dhammaan si waafaqsan qodobka 92aad ee Dastuurkan.
Waxaa uu dheeraad ku yahay tirada Xildhibaanada golaha shacabka, maadaama uu yahay Madaxweyne lagu soo doortay Dastuur KMG ah, isla markaana soo hoggaamiyay dowlad rasmi ah.
Xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu dalka ku negaado oo uu sii joogo, lama oga inuu kulamada Baarlamaanka toos uga qeyb qaadan doono, hase ahaatee khudbad uu u jeediyay Xildhibaanada markii la dhaariyay waxaa uu sheegay inuu ka mid ahaanayo Baarlamaanka.